Daawo Sawirada “Aktar Soomaaliyeed oo markii ugu horeesaay ku guuleestay Abaal marinta BAFTA « AYAAMO TV
Daawo Sawirada “Aktar Soomaaliyeed oo markii ugu horeesaay ku guuleestay Abaal marinta BAFTA
816 Views Date February 17th, 2014 time 12:47 pm
Abaalmarinta BAFTA ayaa sanad walbo waxaa laga bixiyaa Dalka Ingiriiska waxaana la siiyaa Aktarada iyo Filim soo saarayaasha Aduunka ugu Fiican .
Xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayna kasoo qeyb galeen dad magac iyo maamuus ku leh Dunida, ayaa xalay lagu qabtay Magaalada London ee Dalka Ingiriiska, waxaana Xafladan lagu bixinayay abaal marimta BAFTA.
Barkhad Abdi ayaa xalay ka guuleestay aktaro badan oo kula tartamayay abaal marintan qaaliga ah, waxa uuna kusoo baxay Doorka Caawiyah Aktarka , Wiilkan Soomaaliga ah ayaa farxad badan wajigiisa laga dheehanayay markii abaal marinta la siinayay .
Aktarkan Soomaaliyeed ayaa isaga oo faraxsan waxa uu si weyn ugu mahad celiyay Tom Hanks oo ahaa aktarka Filmka Captain Philips ee looga hadlayay Burcad Badeeda Soomaalida, waxa uu sidoo kale u mahad celiyay asxaab badan oo jilitaanka Filimka gacan ku siisay iyo Hooyadiis.
Aktarkan Soomaaliyeed ee kusoo baxay Filimka Captain Philips ayaa sidoo kale ku jira Liiska tartamayaasha abaal marinta ugu weyn Aduunka ee Oscar ee Filimada Hollywood oo la qabanayo bisha soo socota ee March.
Waa Markii ugu horeesay Ruux Soomaali ah ku guuleesto Abaalmarinta BAFTA ee sanad walbo la bixiyo , Barkhad Cabdi ayaana Nasiib u yeeshay in uu noqday Soomaaligii ugu horeeyay ee ku guuleesta Abaalmarinta BAFTA.